ဘာ? ဆူညံသော FAN မရှိဘဲတောက်ပသောထုတ်လွှင့်သည့် LED? | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဘာ? တစ်ဦးကတောက်ပထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဆူညံ FAN မပါဘဲ LED?
သငျသညျစွမ်းအင်ချွေတာတောက်ပ LED အလင်းလ်တာနှင့်သင်၏စတူဒီယို upgrade လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, ဒါပေမယ့်ပရိတ်သတ်တွေတစည်း၏ hum မလိုချင်သလဲ? သငျသညျ PrimeTime နဲ့ LED ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ကြပြီးအအေးခံခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဆက်လက်ရှိနေရန်တစ်ဦးက FAN မလိုအပ်ပါဘူးသင်သိရသလား?
သူတို့တောက်ပနေနှင့်အနည်းငယ်သာပါဝါကိုအသုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်ရုံမန်နေဂျာ PrimeTime ရဲ့အကြမ်းခံအလင်းအိမ်ခိုလှုံပါ၏။ သူတို့ကတတ်နိုင်ပါတယ်, USA တွင် built တစ်ဦးငါးနှစ်ကြာအာမခံပါဝင်သည်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေပန်ကာလိုအပ်မကောင်းစွာ-ဒီဇိုင်း!
သင်အမှန်တကယ် PrimeTime LED ကို Fresnel စတူဒီယိုအလင်းရောင်နှင့်အတူတိတ်ဆိတ်တဲ့ set ကိုရှိနိုင်ပါသည်။
နေရာမှာဂု 51 LED ကို Fresnel - NO FAN!
အဆိုပါတက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြေပြင်ကိုတက်ရာမှတည်ဆောက်ခဲ့သည် နေရာမှာဂု 51 LED ကို Fresnel မယုံနိုင်လောက်အောင်တောက်ပသည်နှင့်သောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းသစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာ၏ NO FAN လိုအပ်သည်။ အဆင့်မြင့်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Micro-Fresnel မှန်ဘီလူးစနစ်ကမဆိုနဲ့ LED Fresnel vs. အလင်း၏အများဆုံးပင်ရေဆေးမှု။ 100%, Machine extruded နှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့လူမီနီယံဆောက်လုပ်ရေး။
အဆိုပါ, နေရာမှာဂုနှင့်သင်၏စတူဒီယို Enhance ခိုင်မာတဲ့အသံတိတ် ရိုက်ထည့်!
1SLED xB နဲ့ LED အလင်း
ဒါဟာအပို Bright သစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းစံင် 1SLED xB။ အားလုံးစတူဒီယို၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံးလာကြတယ်နှင့်ပစ်ကြွားပု 1SLED သော့ချက်သို့မဟုတ်အလင်းရောင်ဖြည့်ပါအသုံးပြုသည်ထွန်း။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်ပြန်နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ထုတ်လွှင့်စတူဒီယို, အကွာအဝေးသင်ယူမှုစင်တာ, ဗီဒီယိုကွန်ဖရစက်ရုံ, မြို့ကောင်စီအခန်းများ, ကိုးကှယျမှုစက်ရုံသို့မဟုတ်တီဗီစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Upgrade ။ အေးမြနဲ့အဆင်ပြေခွက်တဆယ် illumination များအတွက် PrimeTime ရဲ့ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာနဲ့ LED နည်းပညာကိုအတူ USA တွင်ထုတ်လုပ်သော။ အဘယ်သူမျှမပန်လိုအပ်သည်။
MSLED xB နဲ့ LED အလင်း
ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းအင်ထိရောက်သည့် LED နည်းပညာကိုသုံးပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များကရိယာ, အ MSL ချောင်းတစ်ဦးနဲ့ LED နှင့်ညီမျှပါတယ်။ အဆိုပါ MSLED xB chroma သော့ချက်သို့မဟုတ်အင်တာဗျူးအစုံအပေါ်သော့ဖြည့်ပါ, ဘေးထွက်သို့မဟုတ်နောက်ကျောအလင်းအခွက်တဆယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်စတူဒီယို, ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု, ကိုးကှယျမှုန်ဆောင်မှုများ, အကွာအဝေးသင်ယူမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိမ့်မျက်နှာကြက်အလင်းကရိယာလိုအပျကွောငျးကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရအဆောက်အဦးများအဆင့်မြှင့်တင်လေ့ရှိတယ်။
ဆန်းသစ်နှင့် superbly အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာအလင်းရောင်များအတွက်မသိ, PrimeTime (ယခင် KW /2စတူဒီယိုခေါ်) အလင်းရောင်စနစ်များ, Inc ထုတ်လွှင့်အလင်းရောင်စနစ်များ, ဗီဒီယိုကွန်ဖရအလင်းလ်တာ, နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် LED နှင့်ချောင်းစတူဒီယိုအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်တယ်။ PrimeTime ရဲ့အမေရိကန်ထုတ်ကုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အချို့သောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးသတင်းအစုံ, ဗီဒီယိုကွန်ဖရအဆောက်အဦးများ, ကိုးကှယျခွငျးသည်များ, ဘာသာရေးအသံလွှင့်စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို, တက္ကသိုလ်အားကစားစတူဒီယို, မြို့ကောင်စီအခန်းများနှင့်အကွာအဝေးသင်ယူမှုစာသင်ခန်းအလင်းလုပ်ကြံ။ PrimeTime luminaires ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အရည်အသွေးတည်တံ့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှထုတ်လုပ်သော။ 214-393-5998 သို့မဟုတ် [အီးမေးလျ protected]
1SLED xB ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DMX Control နဲ့ LED Fresnel နေရာမှာဂု 51 LED ကို Fresnel အယ်လ်အီးဒီ LED ကို Fresnel MSLED xB Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-10-29
ယခင်: အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း Sinclair ရဲ့ "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း" အတွက် Show Package တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာငှားရမ်းယောသပ်သည်အဖြူရောင်